Chii chinonzi Twitch | e-commerce nhau
Kune akawanda masocial network. Vamwe vanozivikanwa kupfuura vamwe. Uye vamwe vanozvarwa "vane nyeredzi" uye munguva pfupi vanogona kuzvimisa seimwe yeanonyanya kushandiswa. Zvakafanana ndizvo zvakaitika naTwitch. Asi, Chii chinonzi Twitch?
Kana iwe wakanzwa zvakawanda nezvazvo asi hazvisati zvanyatso kujeka kwauri kuti chii uye mabhenefiti azvinopa zvichienzaniswa nemamwe masocial network, nhasi tichatarisa pazviri. Enda nazvo?
1 Chii chinonzi Twitch
1.1 Kwakabva Twitch
2 Iyo inoshanda sei
2.2 Categories uye tags
2.3 Mhando mbiri dzevashandisi
3 Twitch ndeye eCommerce?
3.1 Maitiro ekunyoresa
Chinhu chekutanga chaunofanirwa kufunga nezvacho ipfungwa yeTwitch. Ndiko kuti, chii chinonzi Twitch. Icho chikuva chekutepfenyura mhenyu, ndiko kuti, mavhidhiyo ehupenyu. Parizvino ndiyo yakakura kwazvo pasirese uye, kunyangwe payakazvarwa yaive yakatarisana nemitambo yemavhidhiyo nevatambi, chokwadi ndechekuti nekufamba kwenguva yakakwanisa kuhwina mamwe masekete akaita semimhanzi, mitambo, mararamiro, kushambadzira, nezvimwe.
Muchokwadi, kune akawanda mabhureki nemakambani, kunyangwe zvikwata zvenhabvu zvine yavo Twitch chiteshi.
Iyo social network pachayo inozvitsanangura sezvizvi:
"Twitch ndipo panoungana mamirioni avanhu kurarama mazuva ese kuti vataure, kutaurirana uye kugadzira varaidzo yavo pamwechete."
Zvinoenderana nedatha yatakakwanisa kuunganidza kubva kune yayo yepamutemo peji, ine vashanyi vanopfuura mamiriyoni 2,5 pazuva, nevateereri vanopfuura mamiriyoni 31 pamwedzi uye vangangoita 8 miriyoni vagadziri vekushambadzira pamwedzi.
Muna 2021, nhamba dzeTwitch dziri kuzununguka, sezvo yakaonekwa kupfuura 1,3 trillion maminetsi akatariswa.
Asi zvinhu zvose zvine mavambo, uye munyaya iyi tinofanira kuenda ku2011. Pazuva iro Twitch akazvarwa se spinoff yeJustin.tv. Sezvatakambotaura, inyanzvi mumitambo yemavhidhiyo, uye vazhinji vaive vatambi vakatanga kutama kubva kuYouTube kuenda kuTwitch, zvichiita kuti nharaunda ikure nekukurumidza. Zvekuti zvakaita kuti ma greats etekinoroji atange kutarisa papuratifomu iyi yaiita kunge yakamira kuYouTube.
Uye 2014, Twitch yakatengwa neAmazon. Paive nemakambani makuru maviri kumashure kwake, Google neAmazon, asi yaive yekupedzisira yakahwina mubhadharo. Ndosaka iyo Twitch sevhisi inosanganisirwa muAmazon Prime kunyoreswa.
Amazon payakatora matomu yakakwira zvakare, yakawanda, kwete chete nekuda kweSports nemitambo yemavhidhiyo, asi nekuti mikova yakavhurwa kune mamwe akawanda masekete.
Iyo inotova neyayo TwitchCon, chiitiko chikuru chakaitwa kusangana nevatambi vepamusoro, kutamba mitambo yemavhidhiyo uye kutora chikamu mumitambo yeSports.
Iyo inoshanda sei
Sezvatakambokuudza, Twitch ipuratifomu yekushambadzira, ndiko kuti, kuona nhepfenyuro dzepamoyo. Izvo hazvireve kuti kana yapera inobviswa, iwo mavhidhiyo anogona kusiiwa kuti vamwe vaone.
Panguva iyoyo kurarama munhu ari kugadzira vhidhiyo anodyidzana nevateereri. Semuenzaniso, unogona kunge uchitamba mutambo uye bvunza vateereri vako nzira yavanoda kuti uende nayo. Nenzira iyi, veruzhinji vanotora chikamu muvhidhiyo iyoyo kuburikidza nekutaura kwakagoneswa nemavhidhiyo ese.
Uye zvese zvinoshanda sei? Pane zvikamu zvakawanda:
Uripi se protagonist kune mavhidhiyo mhenyu ari kutepfenyurwa panguva iyoyo zvichienderana nemapoka uye chiteshi; iyo yepamusoro bar, kwauchange uine nhau dzeaya machanera awakanyoresa. Zvakare pano iwe unowana Ongorora, kwaunogona kuwana mavhidhiyo matsva nemachaneli.
Pakupedzisira paizova nepaneru kuruboshwe. Izvi zvinoonekwa kana iwe wakanyoreswa uye neakaunti yako, uye mairi iwe uchaona ese machiteshi aunoteedzera uye mamwe anokurudzirwa kwauri maererano nezvaunofarira.
Categories uye tags
Izvi chete iwe uri 100% unofarira kana iwe uri mugadziri wemukati sezvo ichishanda kurongedza vhidhiyo yauchazogadzira uye nekuisa iwo mavara pairi (aya ndiwo anokubatsira kuti unyorwe mumitsva yekutsvaga uye mukurudziro).
Mhando mbiri dzevashandisi
Iwe unofanirwa kuziva kuti vese vakanyoreswa kune chiteshi uye avo vanotevera chiteshi vanogona kuona kutepfenyura. Saka ndeupi musiyano pakati peimwe neimwe?
Vanyoreri vanofanirwa kubhadhara pamwedzi kune iyo chiteshi mukutsinhana nekuiona isina kushambadzira, ine yakasarudzika kutenderera, mukana wekutaura pachivande neanoyerera uye zvakare kuve nemaemoticons uye zviratidzo.
Panyaya yevateveri, havazokwanisi kuita chero chepamusoro.
Twitch ndeye eCommerce?
Tichifunga nezve blog yatiri, unogona kunge uchinetseka kuti sei tiri kutaura nezve Twitch kana isu takambokuudza kuti yakatarisana nemitambo yemavhidhiyo. Uye yako eCommerce inogona kuve chitoro chembatya.
Zvakanaka, pakutanga ichokwadi kuti Twitch yaive yakawanda yekutepfenyura yemitambo yemavhidhiyo. Asi gare gare akazarura mimhanzi nemitambo. Ndiani anoti mumwedzi mishoma kana makore hatikwanise kuva nenzvimbo inobatawo mamwe masekete.
Uyewo, dzimwe nguva kutanga chirongwa chakadai, uchiziva kuti hauna makwikwi akawandisa, zvinogona kuwedzera eCommerce yako zvakanyanya. Kuenderera mberi nemuenzaniso wechitoro chembatya, unogona kuita nhepfenyuro yehupenyu umo iwe ucharatidza nhau dzaunadzo, ingave yemuviri (ichiratidza magadzirirwo kune vanhu vakati wandei) kana nemifananidzo. Iwe unogona zvakare kupa matipi emaitiro, matipi ekutaridzika kureba, kana kuita kuti sutu iwedzere hunyanzvi.
Zvese izvi, zvezvitsva, zvinogona kukwezva vateereri vanouya kune peji rako uye, nazvo, iwe unogona kutora.
Kana isu takakupwisa, heano matanho aunofanirwa kutevedzera kunyoresa pachikuva. Kwazvo iwe unofanirwa kuenda kune yepamutemo Twitch peji. Paunenge uripo iwe unofanirwa kudzvanya pakanzi "Sign up". Iwe uchaiwana kumusoro, kurudyi.
Zadza ruzivo rwakakumbirwa (zita rekushandisa (rinogona kunge riri chitoro chako), zuva rekuzvarwa (kana kugadzira bhizinesi), password uye email.
La platform inokutumira email kuratidza kuti ndiwe uri kunyoresa. Iwe unofanirwa kuisa iyi nhamba yekuongorora kuti uenderere mberi nekugadzirisa.
Izvi zvinosanganisira kusarudza zvaunofarira.
Chekupedzisira, isu tinokurudzira kuti iwe u activate-zvinhu zviviri-zvechokwadi. Uye ndizvozvo, iwe unogona ikozvino kuita nhepfenyuro uye wotanga kuwana vateveri uye vanyoreri.
Zvirikujeka kwauri kuti Twitch chii?
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » evanhu vezvenhau » Chii chinonzi Twitch
Maitiro ekusimbisa Instagram